Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo gaaray dalka Jabuuti – Geelle Mag
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo gaaray dalka Jabuuti
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Mudane Xasan Maxamed Xijaar iyo Wafdi Saraakiil ah ee uu hoggaaminayo ayaa waxa ay goordhoweyd gaareen Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga ayaa waxaa dalka Jabuuti kusoo dhaweeyay Saraakiisha ugu sareysa Ciidamada Booliska dalkaasi, iyaga oo kulamo ka bilaabay halkaasi.
U jeedada Wafdiga Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Mudane Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxaa lagu sheegay in uu halkaasi tababar ugu soo xiri doono Ciidan Boolis ah oo tababar ku qaatay dalka aynu walaalaha nahay ee Jabuuti.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa inta uu ku sugan yahay dalkaasi Jabuuti ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa Madaxda dalkaas, isaga oo kala hadli doona Arrimo la xiriira tayeynta Ciidanka Booliska Soomaaliya.
Beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan Gobolka Galgaduud oo heshiis rasmi ah la kala dhex-dhigay